Fikarohana momba ny firaisana Fisokafan'ny tsivalona: Ny fanahin'ny Daw Soe, vehivavy Burmese, manomboka fiainam-baovao amin'ny maha-olona, ​​raha mbola velona i Daw: Ny trangam-pitaovan'ny governemanta ao Daw Soe | Maung Tun - Fikarohana momba ny vatana teraka
From: Ny firaisana amin'ny vatana vaovao sy ny biolojia: Contribution to the etiology of birthmarks and birth defects, nataon'i Ian Stevenson, MD, pejy 1906-1911
Ny fisakaizanan'ny renin'i Daw miaraka amin'i Tint, izay ho tonga renin'i Daw rehefa miverina amin'ny vatana vaovao izy
Daw Soe, tovovavy, dia teraka tany Mandalay any Burmese tamin'ny taona 1887. Ny Burma dia fantatra ankehitriny amin'ny Myanmar. Ny Tempolin'i Bodolandan'i Mandalay dia aseho amin'ny sary eo ankavanana. Kitiho eto raha hanitatra.
Nihalehibe tany Mandalay i Daw ary tamin'ny tovovavy dia nanambady izy ary nanana zanaka dimy. Daw sy ny vadiny dia nahazo ny fiainany tamin'ny alalan'ny orinasa varotra izay nanorenany. Nahafinaritra an'i Daw koa ny nisaintsaina.
Daw nanana namana vehivavy tanora iray antsoina hoe Khin San Tint, izay hotondroinay hoe Tint. Na dia tsy havana aza i Tint dia nisy fifandraisana akaiky teo aminy sy i Daw. Raha ny marina, nitahiry ny sarin'i Tint tao an-tranony i Daw ary ny mifanohitra amin'izany, nitahiry ny sarin'i Daw tao an-tranony i Tint.
Raha vao teo am-piandohan'ny 60 izy, dia nanokatra katarakta na fanodikodinan'ny andaniny roa ny Daw, izay nahatonga azy ho jamba. Raha vao 64 taona izy dia nanana fiasa iray tamin'ny masony iray mba hanesorana ilay katarakta. Ny fandidiana dia nahomby, na dia tsy maintsy notafihan'i Daw ny solomasony tamin'ny lantony matevina nandritra ny androm-piainany manontolo mba hahita tsara amin'ny maso izay nokasaina.
Ny naman'i Daw, Tint, dia nanambady ary bevohoka tamin'ny faran'ny 1964. Maty i Daw taoriana kelin'izay, tamin'ny Febroary 22, 1965 tamin'ny taona 78.
Daw Reincarnates ho zazalahy, manao, miaraka amin'ny tonony tahaka ny reniny
Tokony ho tamin'ny 6 volana taty aoriana, tamin'ny volana 28, 1965, Tint dia niteraka zazalahy kely iray, izay nantsoiny hoe Maung Soe Tun. Ho tsotra, hiantso azy hoe Tun.
I Tun dia teraka tany Magwe, tanàna Burmese, izay manodidina ny 60 kilometatra na 37 kilaometatra any Mandalay, izay nonenan'i Daw Soe.
Mpampianatra i Tint. Rehefa tsy tao an-tranon'ny fianakaviana izy nandritra ny andro dia notezain'ny nenitoan'i Tint i Tun.
Manaiky ny fiainany taloha i Tun
Araka ny nomarihina, Tint dia nitahiry ny sarin'i Daw Soe tao an-tranony. Rehefa feno 7 volana i Tun zanakalahin'i Tint, dia nanondro ny sarin'i Daw Soe izy. Raha mijery ity sary ity izy dia mikapoka ny tratrany.
Nanentana ny fianakaviany hanontany azy io fihetsika io: “Soe reny ve ianao?” Ho valin'izay, dia toa faly tamin'io famantarana io i Tun.
Rehefa nanomboka niteny i Tun tamin'ny faha-18 taonany, dia nanondro mivantana mivantana ny fiainany teo aloha izy hoe Daw Soe. Ohatra, Tun dia miresaka momba ny fianakavian'i Daw Soe izay nonina tany Nga-Zun, Burma, na dia mbola tsy tany aza i Tun.
Tun dia manao famantarana fiainana taloha ao an-tranon'i Daw
Rehefa 4 taona i Tun dia nentina tany an-tranon'i Daw Soe ary fantany ny olona izay fantatr'i Daw Soe, izay mbola tsy hitan'i Tun tamin'ny fahavelony. Ohatra, i Tun dia nahafantatra ny rahalahin'i Daw, U Shwe Gaing, izay nantsoin'i Tun tamin'ny anarana nick izay nampiasain'i Daw ho an'ny anadahiny.
Tao an-tranon'i Daw ihany koa, nanondro efitrano iray i Tun, izay, hay, teo no natori'i Daw Soe hatrizay.
Ny fianakavian'i Daw Soe, ho fitsapana ny fiainana taloha, dia nampifangaro ny akanjo sy ny firavaka izay an'i Daw tamin'ny akanjo sy firavaka izay an'ny mpianakavy hafa. Fantatr'i Tun tsara avy eo ny akanjo sy ny firavaka an'i Daw ary nolavina ireo entana izay tsy an'i Daw.
Tamin'ny taona 7, dia nanondro ny sarin'i Daw Soe i Tun ary nilaza fa izy no izy. Manazava koa i Tun fa tahaka ny Daw, ny masony havanana dia nodidiana. Tahaka an'i Daw, dia nanjary liana tamin'ny fisaintsainana i Tun.
Ian Stevenson, MD dia nanamarika fa ny renin'i Tun, Tint, dia bevohoka 3 volana rehefa maty i Daw. Araka izany dia nanan-anaka i Tun telo volana talohan'ny nahafatesan'i Daw.
Raha toa ny fanahy dia tafiditra ao anatin'ny tetikasa, izay inoako fa, dia ny fiainan'i Daw sy ny tovona nohafahan'ireo volana 3. Ian Stevenson, MD dia nandrakitra tranga marobe izay nahitana ny androm-piainany. Stevenson dia nantsoina hoe: "Fomba amin'ny daty tsy fanao"
Antsoiko hoe "Fahatongavana ho nofo nofo" ireo karazana tranga ireo, satria miaina na miaina vatana hafa mihoatra ny iray isaky ny fotoana ny fanahy. Famaritana tranainy kokoa momba an'io trangan-javatra io ny "Parallel Lives."
Fihetseham-po iray nisara-panambadiana, izay nosoratan'i Stevenson momba an'i Ruprecht Schultz. Ruprecht dia teraka 6 herinandro talohan'ny fiainany taloha. Helmut Kohler, dia maty. I Stevenson dia nihevitra fa io tranga vao teraka io dia iray amin'ireo mahery indrindra noketrehiny. Ny fametrahana ity tantara ity dia ny Ady Lehibe Faharoa any Alemana. Raha te hianatra bebe kokoa, azafady mankany:
Ny famonoan-tena amam-pirahalahiana no nahatonga an'i Helmut Kohler | Ruprecht Schultz
Fikirakirana ny fotoana sy fifandraisana amin'ny fiainana taloha: Daw Soe dia manana fifandraisana akaiky amin'i Tint, namana vavy tanora kokoa. Daw reincarnated toy ny zanak'i Tint, Tun.
Ny firaisana amin'ny vatana vaovao sy ny fanovan'ny lahy sy ny vavy: Daw Soe dia vehivavy iray, saingy navaozina tahaka an'i Tun, lehilahy.
Fiverenana ny fisandratana na fiverenana mivantana: Torontoronina telo volana talohan'ny nahafatesan'i Daw i Tun. Raha tafiditra ao anatin'ny dingan-jaza ny fanahy, dia ny fanahin'i Daw | Tun dia namelombelona ny vatan'olombelona roa indray mandeha. Ian Stevenson, MD ao amin'ny University of Virginia dia niantso ireto "Cases with Anomalos Dates" ireto, satria nifandona ny androm-piainany.